Dị nnọọ na-awụlikwa elu ụgbọ mmiri si Android ka iPhone na na na-ahụ na ọkacha mmasị gị Android ngwa-apụghị ozugbo arụnyere na gị na onwunwu iPhone? Echegbula onwe gị, ọtụtụ Android ngwa ọdịnala ha iPhone nsụgharị nke ị nwere ike ibudata site iTunes App Store. Ọbụna ma ọ bụrụ na e nweghị iPhone mbipute dị, ị ka pụrụ ịhụ ọtụtụ ọzọ ma ọ bụ edochi.
Part 1. 7 Free Google ngwa ọdịnala n'ihi iPhone
Part 2. Top 10 Free iPhone égwu
Dị nnọọ nkọ na Google ngwa, dị ka Google olu ngwa n'ihi na iPhone, na chọrọ iji ha na gị na iPhone? Ọ mara oke mma. E nwere ọtụtụ egwu Google ngwa ọdịnala nke pụrụ ime ka ị a otutu fun na mma mgbe eji gị iPhone. Na akụkụ n'okpuru, m depụtara si 7 nke ha. Ugbu a, na-agụ na.
Enweta ihe Google ngwa ọdịnala na iPhone >>
Google Search a kọwara dị ka ndị kasị mma nke Google ke kiet ke otu ngwa. Ọ nwere ike na ngwa ngwa ahụ ihe ị chọrọ na-egosi gị search N'ihi. Ọ bụghị naanị banyere enyocha, kamakwa banyere Google Ugbu a. Google Ugbu a na-akpaghị aka na-egosi na ị na-enye aka ọmụma gị mkpa, dị ka ihu igwe, okporo ụzọ, ozi ọma, mmelite ọkacha mmasị gị na fim, egwuregwu, ihe na-enye gị ntụziaka iji na ebe ọ bụla ị chọrọ ịga. Na-ekwu "OK, Google" ịjụ ajụjụ ọ bụla na Google ga-aza gị.
Ọzọ Ama banyere Google Search ngwa n'ihi na iPhone >>
Google Maps bụ a salient ahaziri map ịnyagharịa gị ụwa mfe na ngwa ngwa. Ọ na-enye gị n'aka-site-n'aka GPS navigations ọ bụla ntụpọ ị chọrọ ịga site-eje ije, biking na-akwọ ụgbọala. Na ya, i nwere ike inwe ihe ọmụma zuru ezu banyere ihe a merenụ na-akọ, ndụ okporo ụzọ na ike re-nsochi usoro.
Ọzọ Ama banyere Google Maps ngwa n'ihi na iPhone >>
Google Translation bụ otu n'ime kasị dị ịrịba ama ngwa, nke na-enyere nyefee 80 asụsụ. Ọ bụ kemfe na bara uru mgbe ị na-amụ asụsụ mba ọzọ, njem gaa mba ma ọ bụ izute ndị ọzọ asụsụ mgbochi.
Ọzọ Ama banyere Google Translation ngwa n'ihi na iPhone >>
Chrome ngwa n'ihi na iPhone enyocha nnọọ ngwa ngwa na-egosipụta na-enye aka results gị. Ọ na-enye gị ike were were ịgbanwee site na otu taabụ ọzọ. Ọ bụrụ na ị banye na Chrome, ị pụrụ ọbụna mmekọrịta gị ahaziri Chrome ahụmahụ, dị ka na-emeghe na taabụ, ibe edokọbara, okwuntughe na ndị ọzọ site na kọmputa gị iPhone.
Mụta ihe banyere Chrome ngwa n'ihi na iPhone >>
Gmail ngwa na-ahapụ gị jikwaa ruo 5 akaụntụ email n'ebe ọ bụla ị na-aga. Ọ ejisie gị ozi ịntanetị site labeling, archiving, ihichapụ, starring na-akọkwara spam. Ọ na-enyere ịchọ gị niile mail ngwa ngwa na zipu ezigbo oge Ịma Ọkwa. E wezụga, ị nwekwara ike zipu ma ọ bụ enweta ozi ịntanetị na Mgbakwụnye.
Mụta ihe banyere Gmail ngwa n'ihi na iPhone >>
Na YouTube ngwa n'ihi na iPhone, ị nwere ike mfe ịchụkwudo na ọkacha mmasị gị videos, na-ekiri a video na-achọ onye ọzọ. Mgbe ị na-na-akpali video, i nwere ike ịkọrọ ya site na Facebook, Twitter, Google + na Email. E wezụga, i nwere ike chọọ ọkacha mmasị gị listi ọkpụkpọ maka ụtọ na ọ laa.
Mụta ihe banyere YouTube ngwa n'ihi na iPhone >>
Google olu na-enye gị ike izipu ozi ederede ọ bụla igwe na US for free na-eme ka mba oku na ala udu. Ọ na-ahapụ ị nwere ohere ozi olu gị ozi na transcription. Otú ọ dị, ọ bụ naanị ike ga-eji na US n'ihi na oge ịbụ.
Mụta ihe banyere Google Voice ngwa fpr iPhone >>
Ndị na-esonụ akụkụ-egosi na ị Top 10 free ngwa ọdịnala n'ihi iPhone. Dị nnọọ nwere anya na ha. Ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla ngwa ị na-interestes, ị nwere ike ibudata ha si iTunes App Store na wụnye na gị iPhone.
10. Igwefoto Awesome
Facebook bụ ndị kasị ewu ewu na-elekọta mmadụ na netwọk gburugburu ụwa. Na ya, ị nwere ike imelite gị ọnọdụ, ibu na ịkọrọ gị photos, video na ndị ọzọ. Ọzọkwa, ị nwere ike mfe ịchụkwudo on ozi, ihe omume, peeji nke, ozi ọma ndepụta, ikori na ndị ọzọ.
Enweta ihe Ama banyere Facebook ngwa n'ihi na iPhone >>
Ọ bụ ezie na FaceTime bụ oké ngwa n'ihi na ị na-eme ka a video ma ọ bụ ọdịyo oku na ndị ọzọ, ọ na-achọ a Mac ma ọ bụ na-akwado iDevice. -Ewere nke a, Skype bụ a nri otu maka gị. Ọ nwere onye ọrụ-enyi na enyi interface, ime ka ị ka oku, na-eziga nzi ozi na nkata na ihe ọ bụla ndị ọzọ nwere a Skype na akaụntụ maka free. Na ya, ị nwekwara ike ịkekọrịta foto gị ezinụlọ na ndị enyi, na-enweghị ókè na foto size.
Enweta ihe Ama banyere Skype ngwa n'ihi na iPhone >>
Dị nnọọ ka Facebook, Twitter bụkwa a nnọọ ewu ewu na-elekọta mmadụ na netwọk. Mgbe ịbanye na Twitter, ị nwere ike inwe na aka gị ezinụlọ, ndị enyi na ndị ọzọ n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla, onwe gị ikwupụta na-ekwu, echiche, videos na photos. E wezụga na, na ị na-enwe ike ịchụkwudo na ihe na-eme gburugburu gị na na ụwa.
Enweta ihe Ama banyere Twitter ngwa n'ihi na iPhone >>
Instagram na-enye gị ụzọ dị mfe iji weghara ma na-eso kwesịrị ncheta oge site na foto na vidiyo na ndị enyi gị, ezinụlọ na ndị ọzọ. Ị nwere ike hazie ọ bụla foto na vidiyo na ọmarịcha na omenala wuru nyo mmetụta, dị ka XPro-LL, Bilie, Earlybird, wdg Ọzọkwa, na ị na-enwe ike Send posts ka ndị enyi gị, nakwa dị ka na-eso posts zitere site na ndị enyi gị. Ime Ugboro interactions na ndị enyi site n'inye ma ọ bụ ịnata amasị na-ekwu.
Mụta ihe banyere Instagram ngwa n'ihi na iPhone >>
Dropbox bụ nnọọ kemfe na magburu onwe ngwa n'ihi na iPhone. Ọ na-enye gị 2GB free ohere n'ihi na ị na-echekwa gị faịlụ, gụnyere photos, videos, Excel, PPT, PDF, Doc, TXT na ndị ọzọ di iche iche nke faịlụ na ígwé ojii. Mgbe ahụ, mgbe ọ bụla ị chọrọ ya, i nwere ike inwe ha na gị na iPhone. Ọ na-eme nke ọma na-agafe nnukwu faịlụ na-ekere òkè unu kpamkpam na gị ezinụlọ, ndị enyi na ndị ọzọ.
Mụta ihe banyere Dropbox ngwa n'ihi na iPhone >>
Dị ka aha ya na-egosi, Evernote bụ ihe dị mfe na-eji na-egbu Cheta na-eme ngwa n'ihi na iPhone. Ọ na-eme ya nnọọ mfe n'ihi na ị na-esi gị ndetu na niile iDevice ị na-eji. Ọ syncs niile ndetu site na kọmputa na iDevices ị na-eji na-azọpụta ha n'elu ígwé ojii. Wezụga ya, ọ na-enyere gị na-ndetu, ndekọ ọdịyo na video ndetu, kpọọ photos na ndị ọzọ. Ị nwere ike ịlele ọdịnaya n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla.
Mụta ihe banyere Evernote ngwa n'ihi na iPhone >>
Dị nnọọ anya n'ihi na ụfọdụ ngwa n'ihi mfe edezi foto gị iPhone? Adobe Photoshop Express bụ ihe ị chọrọ. Ọ na-enyere ịgbatị, nkọ, bugharia, akuku ọ bụla foto na ịgbanwe ya ikpughe mfe. Mgbe edezi, ị nwere ike bipụta foto ma ọ bụ ịkọrọ ha gị ezinụlọ, ndị enyi na ndị ọzọ site na Email, ederede, Facebook, Twitter, wdg
Mụta ihe atụmatụ banyere Adobe Photoshop Express ngwa n'ihi na iPhone >>
iBooks bụ ihe ịtụnanya ngwa n'ihi na gị download ma na-agụ akwụkwọ ndị na-iPhone Mgbe na-agba ọsọ ya na gị na iPhone, ị nwere ike ibudata kpochapụwo akwụkwọ, bestsellers na ihe ọ bụla ndị ọzọ na-amasị gị si e-akwụkwọ ụlọ ahịa. Mgbe ị na-agụ otu akwụkwọ, ị nwere ike họrọ ọkacha mmasị gị Akara ókwú na na na agba na mata okwu, ahịrịokwu, paragraf ma tinye ndetu. E wezụga na, i nwere ike ịkọrọ gị ihe, echiche, echiche banyere ọkacha mmasị gị akwụkwọ na ndị enyi gị site na Facebook, Twitter, Mail na Ozi. Ọ bụrụ na ị na-eji iCloud, iBooks nwere ike imelite ndokwa ibe gị, Isi, ndetu na ndị ọzọ nọ n'ebe nile.
Mụta ihe banyere iBooks ngwa n'ihi na iPhone >>
Flipboard a kọwara dị ka onwe gị magazine si nke ị nwere ike na-achọpụta, jikọọ na ịkọrọ ihe na-eme ụwa mfe. Ọ nwere ala imewe nke na-enyere gị aka Mia peeji nke elu na ala. Mgbe ị na-ụfọdụ na-akpali isiokwu, ị nwere ike itinye gị elekọta mmadụ na netwọk, dị ka Facebook, Instagram, Twitter na ndị ọzọ ga-esi na njikọ ndị enyi gị, ezinụlọ na ndị ọzọ.
Mụta ihe banyere Flipboard ngwa n'ihi na iPhone >>
Igwefoto Awesome dị nnọọ kwesịrị aha ya, nke na-eme foto gị mma na pụtara ọkachamara mmetụta. Na ya, i nwere ike welie gị foto site taping n'ime nza nke presets. Ọ Ome nnọọ ngwa ngwa na-ewe sharper, nke na-eme photos mma kpughere. Mgbe na-ewere photos, ị pụrụ iji ya na-eso ndị enyi gị site na Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Picasa na ndị ọzọ.
Mụta ihe banyere Igwefoto Awesome ngwa n'ihi na iPhone >>
Ibufee ọdịnaya site na iPhone ka PC
Copy faịlụ site Samsung ka iPhone
Copy Ndi ana-akpo si Blackberry ka iPhone
Bugharịa faịlụ site Nokia ka iPhone
Nyefee Data si iPhone ka Mac
iPhone Nyefee Ngwá Ọrụ maka Ị
Wepụ iTunes ndabere File maka iPhone / Android
> Resource> égwu> 17 Best Free iPhone ngwa ọdịnala n'ihi Ị